Sirdoonka Leexsan Iyo Maareeyaha Wakaallada Biyaha Hargeysa. W/Q:-Abwaan C,raxmaan Abees. |
Sirdoonka Leexsan Iyo Maareeyaha Wakaallada Biyaha Hargeysa. W/Q:-Abwaan C,raxmaan Abees.
Sirdoonka Leexsan Iyo Maareeyaha Wakaallada Biyaha Hargeysa.
Sirdoonka leexsan ee magaaladda Hargeysa ka jira, waxa ay hoos tagaan caadiyan madaxtooyada iyo wiil uu dhalay Madaxweyne Muuse Biixi. Laakiin waxa ay xagga dhaqaalaha hoos tagaan oo ay lacagta ka qaataan Maareeyaha Wakaalladda Biyaha Hargeysa, Maxamed Cali Daarood. Maddaama oo sirdoonkan leexsani aanu miisaaniyada qaranka ku jirin, si sir ah oo hoosana la rabo in ay wixii shaqo ah ee loo diro u qabtaan, Maareeyaha Wakaaladda Biyaha ayaa qaabilsan dhaqaalaha ku baxa hawlgalka ay sameeyaan, sida shiidaalka, gawaadhida iyo kharashaadkooda kolba inta habeenka hawlgalada loo diraayo iyo mushaharkoodaba.
Arrinkan oo aad loo qarinaayay waa shaqada ka dhexeysa sirdoonka leexsan iyo Maareeye Maxamed’e, waxa aan anigu ogaaday maalmihii dhawa ee buugga “Mayal” ay ku daba jireen sirdoonka leexsani.
Xukuumadda Madaxweyne Biixi waxa dhab ah in badankeeda dadkii uu magacaabay waxa ay hayaan shaqo leexsan, sida maareeyahan wakaallada biyaha oo kale. Xukuumaddan Madaxweyne Muuse Biixi xirfadaha ay isticmaasho waxa ka mid ah, in marka shacabku hay’ad ka mid ah xukuumadda shaqadooda wax ka weyddiiyaan dhacdo marka taaganiba ha keente, hay’addii masuuliyada lahayd waa ay dhuumata, waxaana la soo istaadha masuuliyiin kale oo hay’addo kale madax ka ah. Waxa ayna markaas bartilmaamsadaan oo ay cay iyo aflegaado ku qasaan cidda kolba arrinka taagan ay isleeyahiin danada ayay ka riixaysa ama si uun ula xidhiidhsan.
Tusaale ahaan, dad ay ka mid yahiin Agaasime Xinif, Afhayeen Buuni, Wasiir Ina Abokor iyo Wasiir-kuxigeenkii wasaaradda ganacsiga, ayaa jawaab aan munaasib ahayn bulshada la soo wadaagan, waxa ayna weeraraan fariin sidaha si nuxurka fariintu u lunto ama u dhimato. Kolba inta dadku fahmaan qiyamkooda ma ahe in kale oo hor leh ayay ku soo beddeli. Bal bulshadii dalka lahayd iyo xildhibaanno ayaa hay’adii amniga oo fadaro noqotay ka hadlaayay, iyaga oo dad saxafiyiin muwaaddiniin ah dhib loo geystaye xaggee baa ay jawaabta maareeyahani galaysa?
Shaqadda uu qaranka u haya waa kuwa ugu dayacan ee ugu liita, magaaladda biyaheedii loo diray wax ma ka qabtay? Saddex sanno oo isku xiga ayaa aad hal ceel oo isku mid ah miisaaniyadahooda ku jira oo aad ku arkaysa. Sababta uu Xidlhibaan Barkhad Batuun sida anshaxa darran ugu ugu maagayayna waa xildhibaanku shaqadiisii leexsanayd duray shalay, waana halka ay iska soo galaan In galaan sirdoonka leexsan iyo maareeyahan leexsani. Hadda, ciidankii amaanka qaabilsana iyo booliskii maxa ay uga hadli waayeen arrinkan? Sababtu waa in aanay haynin jawaab sax ah oo shacbka qancin karta?
Sirdoonka leexsani waxa uu ka hawlgala dhammaan gobaha la isugu yimaado ee dhallinyarada iyo dadku ku caweeyaan, si ay u ogaadan dadka inta saluugsan ee fahansan siyaasadda xukuumadda, qiimayn kadib dabadeed waa ay daba dhigtaan. Arrintan Sirdoonka leexsani waa calaamad sheegaysa in aan dalkan doorasho in ay ka dhacdo aanay madaxtooyadu rabin. Dalka qasab iyo xoog in lagu haysto ayaa la raba, intii ka hadashana sirdoonka leexsani afka ciid ugu guraan habeenkii, xaalka dadkuna u noqdo halhayskii odhan jiray, “Col hortii jabayeey.” Iyada, oo aan doorashaba la isla gaadhin.
Idinku u fiirsada hadallada wanaagsan ee Madaxweyne Biixi iyo ficilladan foosha xunxun ee dalka ka dhacaaya.
Sidii roon Allahayoow.